Qofna waxaan loo qorin ma qariiro | Heeshi
Qofna waxaan loo qorin ma qariiro
Khamiis, Nofeembar 28, 2013 ·	by Idiris M. Cali ·	in Maqaallo	· Faallo u dhaaf
Markaad ku tiri, “Shaqayso”; hadduu kugu yiri, “Sadkeey-qoran”: Miyaad gaaggaabsan lahayd, inkastood hoos iyo kor u kuuraysay laxaadkiisa buuxa ee uu Eebbe isagaas ku galladay?
Markuu ku halgaadayee, “Alla-aamin ma tihid” kugu sii cirbiyay, miyaad u garaabi lahayd, adigoo hoos isu leh, “Waa runtii, waa runtii, qofna waxaan loo qorin ma qariiro”?
Mise adoo taas rumaysan ayaad haddana soo xasuusan lahayd: Xaglo laaban xoolo ku ma yimaaddaan?* Debadeed, ma ku dhiirran lahayd inaad maahmaahdaas oo qudha isku gaashaanto?
Mise iftiin kale ayaa kuu bixi lahaa? Nebi Muxammad (NNKH) miyaad soo xasuusan lahayd markuu ninka u sheegay inuu, horta, ratiga dabro, isaga oo waliba Eebbe talada saaranaya?
Sideed se iftiinkaas ugu daari lahayd kii ku badawsaday? Kolkaas, saw ma’aha inaad kaas u meeriso xadiiska wanaagsan ee Sunan at-Tirmidi kaga soo arooray barta 2517d?
Adigoo iftiinkaas u daaray, miyaad tusmada 11d ee deerka ar-Racad ugu sii weynayn lahayd iftinkaas? Qaybteeda dhexe ee tusmadan miyaadan ku adkayseen: Eebbe ma dooriyo wax dad ku sugan yahay jeer ay ka dooriyaan waxa naftoodu ku sugan tahay?
Haddaba, saw kaas ku badawsaday is ma garteen ka uu yahay? Saw ma garteen inuu tusmo Eebbe iyo xadiis Nebi (NNKH) garab maray? Saw ma garteen inuu hortaba dafirsanaa awooddii uu Eebbe ugu deeqay, ee uu sadkiisa ku raadsan lahaa?
Markuu ku yiri, “Alle-aammin ma tihid,” inaad ku dhahday ahayd, “Adigaan ahayn. Waayo, qof la siiyay awooddii uu ku shaqaysan lahaa oo kas u dayacaya waxaa haya kibir; qof kibirsanna Alle-aammin ma noqon karo!
“Qofna waxaan loo qorin ma qariiro. Waa run. Awoodaha kala batay ee Eebbe innagu galladay ba waa qorriin. Haddii awoodahaas wax lagaa ga qoray, maxaad ugu shaqaysan la’dahay—wax Eebbe kaaga sii qoroba aad ka dhalaashatide?
“Galladaha Eebbe ku siiyay ku doono daarta Aakhiraad, hana moogaan sadkaaga aad adduunkan ku leedahay, una wanaagsamow sida Eebbe kuu wanaajiyay, hana qasin dhulka, saa Eebbe ma jecla qaswadayaasha e. Waa tusmada 77d ee deerka Al-Qasas.”
* Maahmaahdaas qof geel-soo-dhicis lagu guubaabinayo (xaaraan), iyo qof si xalaal ah u shaqayso la leeyahay ba waa loo wada cuskan karaa. Danta aan ka leennahay maahmaahdaas waa taas xalaasha ah ee uu qoraalkani ku dabuuban yahay, waayo xadiis iyo aayado toonna xumaan-tiirin u maanaan soo daliishan lahayn! Sababta aan ereyada “qudha” iyo “iftiin” u adeegsanayno ba ku garo in maahmaahdaasu galdalloolo leedahay, oo aan ereyadaas iyaga ah ku xoojinayno dhanka togan ee maahmaahdaas!
Tilmaamayaal: Iimaan, Islaamnimo
← Xubnaha godka toddobaad
Barashada iyo Bartaha →